Hevitra MPANOHARIANA | Andavanandro | 16
Vaovao aty Antsirabe
2008-08-19 @ 16:11 in Andavanandro
Tena miserana eto amin'ny serasera tokoa aho amin'io fotoana izao. Niova rivotra fa diso kosa angamba ny fiteny hoe niala sasatra raha heverina. Misy ny vitsy azo soratana vetivety. Voalohany raha nidina taty aho tamin'ny alahady dia efa vitsy dia vitsy ny fiara fa ny olona koa mbola vitsy noho izany. Vokany ny fiara ihany no nilahatra fa tsy ny olona. Manamarika ve izany , noho ny fahitana ny taloha fa tena efa sahirana dia sahirana tokoa ny olona?
Raha tonga teny amin'ny fitobian'ny fiara ihany koa aho dia gaga fa tsy nahita ireny mpanera nifampisintosintona ireny. Hay moa ka noraofin'ny polisy avokoa ry zalahy tena nanao fisintonana ny nikasika mpandeha ireny. Vokany tsy misy mahazo mikasika mpandeha na iza na iza.
Manaraka izany tena tsy nahara-baovao mihitsy aho hatrizay niovako rivotra izay. efa saiky tsy hiserasera aho fa nahita cyber nalalaka tampoka dia roboka indray. Fa tena nahavariana ahy ny hamaroan'ny tanora ataoko hoe tsy mbola mahatratra 20 akory dia efa mitarika anaka. Maro loatra araka ny fiheverako azy, nefa ve porofon'ny hoe tsy ampy fialam-boly ny tanora? Sao dia mitady revy tafahoatra kosa ary ka tratran'ny sasany amin'ny kely foana? asa anefa.
Manaraka, efa niomana amin'ny entana ho entinia ihany aho fa mbola nanadio akanjo ba ihany. Soa ihany fa tsy nahatsiaro mangatsiaka loatra na dia izany aza.
Ataoko fa fa efa lavalava ihany izay na dia mbola manankolazaina aza aho. Ho avy ny sary efa akaiky ny zato. Fa milaza aminareo hoe mitohy ny fiovana rivotra ka tsy ho eto Antsirabe fa toeran-kafa indray...amin'ny manaraka lazaina. Dia any ho any indray vao manoratra sy mifampiserasera eee!
Faly dia faly amin'ny telma aho
2008-08-13 @ 22:56 in Andavanandro
Mametraka ity lahatsoratra ity aho eto hilaza ny hafaliako, ary mino aho fa ho haingana dia haingana ny famakianareo ao amin'ny Telma ity fijoroana vavolombelona hahafaly anareo ity. Manantena ary aho fa mety hapetrakareo ao amin'ny vohikalanareo ny fijoroana vavolombelona tahaka itony soratako itony milaza ny antony tokony hifidianana ny Telma fa tsy ireo mpanome tolo-pifandraisana hafa.
Fa dia inona loatra moa no nahafaly ahy ka mahatery ahy hanoratra ity fijoroana vavolombelona ity? Nividy sofindavitra Telma fixe mobile (24 moa no fahalalana azy ho an'ny eto Antananarivo) aho mba ahafahana miserasera amin'ny aterineto no tena antony voalohany sy lehibe indrindra. Kanjo dia nasehon'ny Telma sy noporofoiny fa manambola 10 000 ariary ariana fotsiny aho. Naharihariny fa manankarena aho e! Iza na olona tahaka ny ahoana moa izany manary vola 10 000 ariary amin'ny tsy antony izany afa-tsy ny olona manankohariana? Nabaribariny ary fa anisany aho na dia tsy manana fiara, iray amin'ny famantarana ivelany maha-mpanankohariana aza. Tena manafinkarena aho rey olona ô! Ahoana angaha izany hoy ianareo?
Marihina aloha fa tsy ilay millionakà kilalao mety ahazoana 1 000 000 ariary izay tsy mbola nilalaovako mihitsy no nanehoany ahy izany harenako izany. Efa voaloazako teo aloha fa noho ny serasera aterineto no tena nividianako 24. Noho izany tsy dia miantso loatra amin'ilay 24 aho, fa io ary no iantsoako ny ao an-trano indraindray. Nisy ambina fahana izay izy io roa volana lasa angamba izay. 6 000 arivo ariary eo ho eo io tahirina fahana io. Iray volana ihany no fetra dia tsy maintsy mamahana ianao raha tsy izany dia levona ho azy tahaka Faosifaoro io... Tsia, lasa tombombarotra manokana ho an'ny Telma io hanentsenana ny illimité fantiantoka ho an'ny telma azon'ny mpividy telma rehetra mandritra ny iray volana. Fitiaana lehibe ny mpanjifa kosa aloha tsy misy tahaka izany e! Tara iray andro aho ary akory ny hafaliako fa nomeko ny telma maimaipoana ilay 6 000 ariary teo. Ny hany fahavoazany dia tsy maintsy mampiditra fahana vaovao aho mba ho sambany hiantso amin'ilay telma 24 ahy. Mba ahafahako miantso iray volana dia voatery aho nampiditra fahana 5 000 ariary indray ary nampirisika ny ao an-trano hiantso aminy entiko ilazana amin-dry zareo fa tena tia fitsitsiana tokoa aho, nefa hanehoako ny maha-mpanankohariana ahy ihany koa. Tsy mety miantso amin'ilay izy anefa ry zareo rehefa mijery ny antso rehetra natao taminy aho.
Tsy tandritandriko akory ny fehim-potoana efa lasa taorian'ny namahanako azy 5 000 ariary farany teo iny fa mba saiky hiantso indray aho. Ary dia tamin'ny hafaliana lehibe indray no nandrenesako avy amin'ilay feo fa raha hiantso aho dia mila fahanana indray izy io fa efa nanjavona ilay fahana nataoko farany tao. Faly dia faly tokoa ny tenako ka dia izao tantaraiko izao fa omeko amin'ny foko manontolo ny telma ny fahana mitentina 10 000 ariary mahery ho fijoroana vavolombelona amin'ny fahatsaran'ny asa ataon-dry zareo. Fandraisana anjara fanohanako ny telma tamin'ny nandroahana mpiasa anjatony tao aminy iny nefa dia naka mpiasa hafa vaovao indray izy. Iza hoy ianareo no manana izany zavabita mahafinaritra sy mahafaly tahaka izany fa tsy ny telma? Mandroaka mpiasa maro efa nahazoazo taona dia maka mpiasa maro hafa vaovao izay tanora no betsaka! Soa ihany fa samy Malagasy na ny noroahina na ny mpiasa vaovao noraisiny ary io no porofo fa mitsinjo manokana ny tanora ny telma na dia asiany mafy dia mafy aza ny ray aman-dreny nahavita be fa tsy hahavita azy intsony ka roahina mialoha ny haharetirety azy. Ny tanora ihany koa anie no maro an'isa ka manaja ny demaokirasia tsara ny telma e! Tombony azy manokana ihany koa aloha iny.
Farany dia mahazo tezitra dia tezitra amiko ianareo rehetra tsy mitovy hevitra amiko. Satria mora dia mora ny nahazoako ilay 10 000 ariary mihoatra ka tsy raharahako ny manome azy ny telma fa tsy ho amin'ny fanarenana ny rova na ny lapan'ny tanàna izay haorina indray avokoa. Telma no tena azo itokisana ary dia mendrika azy ny mahazo vola betsaka izay tsy haiko na tafiditra anatin'ny kaontin'ny orinasa na trohin'ny olona sasany mahalala zavatra ary mametraka hatrany amin'ny fitantanam-bolany fa tsy misy manary vola toa ahy izany mihitsy ny mpanjifa ao aminy. Na izany aza te-hibedy an'ilay kidorompamba iny aho hoe fa maninona no afindran'ialahy aty amiko ity aretina manindrahindra ity? Tena tsy mety mihitsy izao fa lasa mametraka ahy ho mpisolelaka mihitsy. Omeo fanafodyahingana aho fa raha tsy izany...
Tsy ho hitanao ao amin'ny Viva TV sy...
2008-07-26 @ 07:15 in Andavanandro
Ataoko fa efa fantatry ny rehetra ny fodiamandrin'ny ngezalahin'ny politika malagasy iray, Atoa Herizo Razafimahaleo, omaly Zoma maraina. Tsy dia fahafatesana tampoka akory io fa efa tsy salama ihany ny lehilahy nanditra ny roa volana farany niainany, araka ny loharanom-baovao iray azoko. Toa manamarina ity loharanombaovao ity ny filazan'ny vaovaon'ny TVplus nandritra ny invité de zoma omaly, fa efa indroa nasaina ny lehilahy saingy tsy afaka hatrany tamin'ny volana jona. Nisy, araka ilay loharanom-baovao ihany, ny fotoana saika hodiovim-boa izy saingy noho ny fahasorenana tampoka nianjady taminy dia tsy azo notanterahina izany.
Andro maromaro taty aoriana indray dia tsy nahatsiaro tena tampoka izy ka voatery nampidirina tao amin'ny Espace Medicale, rehefa nihombo ny aretina dia nentina teny amin'ny Polyclinique Ilafy indray izy ary tany no tsy tana intsony ny ainy. Amin'ny alatsinainy izao araka ny re no entina midina any Ambositra ny nofony ary amin'ny alarobia kosa vao halevina. Araka ny fijeriko azy, ny mahatonga io fotoana somary taraiky io dia ho fiandrasana ireo havana aman-tsakaiza any ampitan-dranomasina. Nisy moa ny niteny hoe io izany no nolazain'ny mpahita tamin'ny volana janoary hoe hisy mpanao politika iray lehibe hodimandry amin'ity taona ity, nihevitra ny olona raha vao nahita ny lohateny lehibe fa ny goaika antitra efa nanana ny anjara toerany lehibe teo amin'ny fitondram-panjakana, aleo tsy milaza anarana sao lazaina fa manozona, izany lazain'ny mpahita izany kanjo... na izany na tsy izany dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ny tenako.
Fa zavatra hafa tsy mifandraika amin'iny fodiamandry iny velively ary nanaovana ny lohateny rahateo dia ny olana nitranga omaly folakandro tetsy Soarano. Efa nolazaiko ihany tamin'ny alahady teo (Vavaka manova zavatra) ny fandraofan'ny mpiasan'ny Kaominina ny entan'ny mpivarotra amoron-dalana. Rehefa misy ny tahaka izany dia ny mpiasan'ny Kaominina no manenjika ny mpivarotra. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nivadika ny rasa, ny mpivarotra indray no manenjika ny mpiasan'ny Kaominina ary izay tratrany dia voadaroka. Voatery nandositra niafina tao amin'ny Boriborintany (Firaisana io fa tsy paositry ny polisy) voalohany ho fiarovany ny ainy ireo mpiasan'ny Kaominina ireo. Horakoraka ny an'ny mpivarotra amorondalana tamin'io fotoana io. Voatery nambenan'ny polisy kaominaly nandritra ny atsasakadiny teo ho eo ny Biraon'ny Firaisam-pokontany mandra-piparitak'ireo nanenjika ny mpiasan'ny Kaominina.
Inona moa no nahatonga ny toe-draharaha nampitroatra ireo mpivarotra amorondalana ireo? Atao hoe manararao-pahefana sady mangalatra ry zalahy rehefa mandraoka entana, araka ny filazan'ny mpivarotra amoron-dalana. Amin'ny fotoana tsotra rehefa tsy miserana eny ho eny ny delegen'ny Ben'ny tanàna dia hakan-dry zalahy 500Ar ireo mpivarotra ireo (araka ny filazan'ny mpivarotra izany) dia avelany mivarotra. Rehefa misy tompon'andraikitra miserana anefa dia raikitra amin'izay ny fandraofan'entana. Izay noraofina anefa dia tsy misy tafaverina intsony (fa ifampizaran-dry zalahy angamba) na dia manaiky ny handoa sazy aza ny mpivarotra.
Tahaka ny ahoana moa izany sazy izany? Rehefa te-haka ny entana voaraoka dia mandoa vola 10 000Ar amin'ny fahatrarana voalohany, 20 000Ar raha tratra fanindroany ary 30 000Ar raha tratra fanintelony. Vola ihany izany ho an'ny olona sahirana, vonona ny handoa ry zareo saingy ny entana no tsy hita nanjavonana intsony avy eo. Mijoro ho azy avy eo ny fanoherana. Amin'ity tranga ity moa dia manahirana ihany, mandreraka dia mandreraka ny voasakatsakan-dalana voatery midina an-dalana, lasa tsy matahotra fiara intsony, noho ny ataon-dry zareo; fa tsy mety ihany koa ny mangalatra ankitsirano manala baraka ny Ben'ny tanàna, ataon'ny sasany tia kely.
CUA: ezaka fanatsarana na misy aza ny lesoka
2008-07-24 @ 12:32 in Andavanandro
Tsy azo atao ny manao ambany maso tsy hita ka minia mikimpy eo anatrehan'ny ezaka ataon'ny mpitantana ny tanànan'Antananarivo ankehitriny. Ezahina manko amin'izao fotoana izao ny hanaovana tara ny morondalana ratsy voatra tamin'ny farany ka lasa nampiseho ny tany mena ka toy ireny hoe any ambanivohitra ireny ny tany itsahina. Toy izany koa ny nandrakofana tara ny tsenan'ny Pochard. Izay fitaovana tonga nolazain'ny gazety any no tsy fantatro aloha fa izay zavatra natao izay aloha no hitako. Angaha vitan'izany ihany, any amin'ny fandaminana koa dia taratra ny ezaka hamitana haingana ny raharahan'olona.
Nanan-javatra natao tampoka manko aho tao amin'ny Boriborintany voalohany etsy Soarano. Vao tafiditra ny lalantsara aho hiankavia dia gaga fa lasa efitrano iray lehibe tsy misy efitrefitra no novantanina. Ireo birao maro no milahatra mandray ny olona. Tamin'ny sivy ora sy sasany mahery aho no nandalo tao, tsy dia nahita filaharana loatra intsony aho. Ny birao tsirairay fotsiny no misy afisy manambara ny zavatra ataony. Dia nokarohiko izay nataoko, hitako avy hatrany. Dia noraisina ny taratasy, nasaina nankeo amin'ny fandoavambola eo akaikikaiky eo ihany, nandoa ny vola dia nafindra toerana farany miandry fiantsoana ny laharana. 30 segondra raha nisy dia efa voantso sahady ny anarana fa dia vita ny raharaha natao. Izaho indray no gaga hoe vita sahady ve? Tena tsara tokoa aloha izany.
Ny olana kely, teo amin'ny fandoavana vola (100Ar) dia tsy nisy tapakila fanamarinana. Noho ilay izy 100Ar ve ka manjary fandaniana taratasy fotsiny. Ny namako iray nitovy zavatra atao tamiko anefa dia nandoa 200Ar. Gaga aho tamin'iny ka manao hoe efa misy sanda raikitra isaky ny raharaha ve sa araka ny olona mitondra ny taratasy ilay izy. Samy tsy nisy tapakila fanamarinana io ka tsara jeren'ny Ben'ny tanàna na izay tompon'andraikitra mahefa io tranga io.
Manaraka izany dia momba ity olan'ny fitaterana mankany Moramanga ity. Rehefa dinihina dia ilay koperativa iray tokoa no tian'ny olona fa tsy misy te-handeha amin'ny hafa ry zareo. Vao tonga ny Kompima dia ifandrombahana fatratra raha vao hiditra ny gara fandraisana azy. Nosazian'ny mpitandro ny filaminana avy hatrany nefa ny olona no nanakana sy nifandrombaka niditra tsy nahafahan'ny saofera nihetsika. Enga anie mba ho hitan'ny mpiandraikitra ny tanàna ihany koa io olana io satria tsy nanaonao foana ny olona raha mifandrombaka amin'io fitaterana iray io. Io ihany manko no tena mikojakoja ny fiarany sy mahay mifanampy eny an-dalàna raha sanatria misy tsy fetezana eny an-dalana.
hisondrotra ny sanda fandoa amin'ny kolikoly
2008-05-31 @ 09:29 in Andavanandro
Araka ny efa malaza amin'ny fampahalalam-baovao sy ny fitarainan'ireo izay efa niharany dia nisondrotra avo dia avo ny sazy aloa amin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fifamoivoizana. Tafiditra amin'izany tsy fanarahan-dalàna izany ny tsy fahampian'ny antontan-taratasy na ny fanadinoana azy any an-trano raha tratran'ny fisavana tampoka.
Ny hany mampisalasala dia hoe 100 000Ar (vola indroan'ny karama ambany indrindra ara-dalàna) ilay sazy kely indrindra tsy maintsy aloa sa 100 000Iraimbilanja (vola saiky atsasaky ny karama ambany indrindra eken'ny lalàna sosialy)? Nisy manko ny gazety milaza ilay ery ambony nefa ny fitarainana heno dia toa manondro kosa ny faharoa. Ambony ampanga ny vola faritan'ny Kaominina nitrangan'ny sazy izay samy manana ny azy.
Mazava loatra fa ity gasy tsy tia hisahirana ity dia midify araka izay azo atao izany handoa any amin'ny ara-dalàna izany fa aleo "manome kely" ilay tratra nisava raha mbola azo atao ihany koa izany. Eo indrindra ny resaka: raha vitan'ny 1500Ar manko ny raharaha teo aloha teo dia mety hisondrotra na hihoatra ny 5000Ar izany vola fandoa eny anivon'ny fanaovana kolikoly izany raha tratra amin'ny atoandro fa mety hihoatra ny 10 000Ar kosa izany raha tratra amin'ny hariva.
Ny mahagaga rehefa mamaky ny gazety dia misy ny manambara fa misy karazana fisavana ara-teknika ny fiara koa eny an-dalambe eny. Nahahendratra ahy io satria toa mampiharihary ny tsy fetezan'ny fanaovana vizity eny Alarobia (na eny Betongolo raha eto Antananarivo) nefa dia toa iniana odiana fanina. Malaza dia malaza koa manko ny fanaovana kolikoly eny nefa toa tsy mety taitra amin'izany mihitsy ny tompon'andraikitra raha tsy hoe izy mihitsy koa no mbola tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanaovana kolikoly eny.
Ny mahatsikaiky indray dia mety ho efa rentsika ny 'operation coup de poing' ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao amin'ny fanerena ny mpitondra sy ny mpitaingina soavalivy tsy maintsy manao aroloha ary ny mpitondra fiara mametraka indray ny fehikibo aroaina. Ny mahavariana dia ity, ny saofera no terena tsy maintsy mametaka ny fehikibo aroaina fa ilay olona eo anilany kosa toa tsy maninona na tsy mametaka io fehikibo aroaina io. Inona ary ity?
fanamarihana: Mety hivoaka atsy ho atsy ny lahatsoratro mahasosotra dia mahasosotra momba ny baolina fandaka malagasy izay nefa hevitro manokana io. Mampiomana ny rehetra aho amin'io nefa miangavy ny rehetra handinika tokoa izay tokony ho izy. Mety hisy koa lahatsoratra momba ny baolina fandaka ihany izay heveriko fa tokony hahafinaritra kosa saingy boky kosa no holazaiko amin'io.
«Mialoha 1 2 3 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25 26 27 Manaraka»